अर्नालाई बचाउन ढिस्को निर्माण
२o७५ चैत ९ शनिबार / Saturday, March 23, 2019
२o७५ श्रावण ९ बुधबार
फाइल तस्विर ।
चितवन / चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पुरानो पदमपुर क्षेत्रमा राखिएका अर्नालाई बर्सातमा बाढीबाट जोगाउन ढिस्को निर्माण गरिएको छ । गत वर्षको बर्सातमा आएको बाढीका कारण दुई अर्ना मरेका थिए । बाँकी सबै संक्रमणबाट ग्रसित भएका थिए । बाढीकै कारण सोही ठाउँमा राखिएका तीन बाह्रसिंगे हराएका थिए ।
निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत अभिनय पाठकका अनुसार एक मिटर अग्लो, ६ मिटर चौडा र २० मिटर लामो दुई वटा ढिस्को निर्माण गरिएको छ । पाठकका अनुसार बर्सातमा बाढी आएमा अर्ना ढिस्कोमा बस्न सक्ने बनाइएको छ । बाढीको समयमा सबैतिर पानी भरिँदा ओभानोमा बस्न सहयोग पुग्ने र सामान्य घाँस ओभानोमा उपलब्ध गराउन ढिस्को निर्माण गरिएको बताइएको छ ।
तारवार गरिएको क्षेत्रमा पानी छिर्ने ठाउँ र बाहिरिने ठाउँमा ढलान गरेर बलियो बनाइएको छ । पाठकका अनुसार पानी बाहिरिने ठाउँमा बाढीले भत्काएर गत वर्ष तीन वटा बाह्रसिंगे भागेका थिए । पानीले खोलेर अर्ना र बाह्रसिंगे बाहिर जान नपाउन भन्नका लागि समयमा नै ढलान गरिएको उनले बताए । गत वर्ष बाढीका कारण खानाको अभावले सबै अर्ना बिरामी परेका थिए ।
निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक कमल गैरेका अनुसार गत वर्ष बर्सातका कारण खानेकुरा अस्वस्थकर भई अर्नामा परजीवी फैलिएको थियो । लामो समयसम्म उपचार र बाहिरबाट पोषण एवम् खानेकुरा खुवाएपछि अर्ना बचेको उनले बताए । हाल दैनिक हात्तीबाट सो स्थानमा पुगेर अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ । अर्नाको नियमित गोबर परीक्षण गरिएको उनले बताए ।
पाठकका अनुसार हाल सो ठाउँमा नौ वटा अर्ना रहेका छन् । ती मध्ये दुई भाले र अन्य पोथी छन् । सोही ठाउँमा एउटा पोथी बाह्रसिंगे छ । तीन वटा अर्ना ब्याउने अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।
गत वर्ष कोशीटप्पुबाट अर्ना र शुक्लाफाँटाबाट बाह्रसिंगे ल्याइएको थियो । निकुञ्जभित्र पुरानो पदमपुर क्षेत्रमा ३० हेक्टर जमीनलाई विद्युतीय तारबार गरेर कोशीबाट ल्याइएका १२ र जावलाखेलको सदर चिडियाखानाबाट ल्याइएका तीन सहित १५ अर्ना राखिएको थियो । चिडियाखानाबाट ल्याइएका तीन वटा अर्ना पहिला नै मरेका थिए । बाढीले दुई र बाघले खाएर एउटा अर्ना मरेपछि नौ वटा बाँकी रहेका हुन् । बाह्रसिंगे सात वटा ल्याइएकामा तत्कालै तीन वटा मरेका थिए भने तीन वटा बाढी सँगै हराएको र एउटा बाँकी रहेको पाठकले बताए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पोखरी निर्माण गर्न शुरु
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तुलाई लक्ष गरी निकुञ्जभित्र पोखरी निर्माण गर्ने काम शुरु भएको छ । निकुञ्जले वन्यजन्तुका लागि पानी पिउन र पैडिन मिल्ने गरी ६० वटा पोखरी निर्माण गर्न
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माण नगर्न परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन फैसला जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सो क्षेत्रभित्र
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आजदेखि प्लाष्टिक प्रतिबन्ध
चितवन । के तपाइँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ । आजबाट निकुञ्ज प्रवेश गर्दा प्लाष्टिकजन्य वस्तु लिएर जान पाउनुहुने छैन । सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई प्लाष्टिक नाई भन्नु ल ! भनी
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्लाष्टिक मुक्त घोषणा गरिँदै
चितवन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्लाष्टिक मुक्त निकुञ्ज घोषणा गरिने भएको छ । यही जनवारी १ अर्थात् पुस १७ गते बृहत् कार्यक्रमको आयोजना गरी निकुञ्जलाई प्लाष्टिक मुक्त घोषणा गर्न लागिएको हो
‘ए मेरो हजुर ३’ को दोस्रो गीत सार्वजनिक, अनमोल र सुहानाको सुहाएको जोडी !
देश तिब्र परिवर्तनको क्रममा छ – प्रधानमन्त्री ओली
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल स्वदेश फिर्ता
यस बर्ष रिलिज भएका ६ बलिवुड फिल्म, जसले गरे उत्कृष्ट कलेक्सन
भारतीय सीमा सुरक्षाबलद्वारा मुक्तहलियाका घर निर्माणमा रोक
हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण नगरौँ : मन्त्री बाँस्कोटा
बढ्दो हिंसाको अन्त्य गर्न महिला आफैँ क्रियाशील हुनु आवश्यक : मन्त्री थापा
माथिल्लो तामाकोशीको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत, आगामी मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा आउने
रियल म्याड्रिडविरुद्धको प्रदर्शनपछि ब्राजिलको राष्ट्रिय टिममा डेभ्यु गर्दै डेभिड
पाकिस्तानको राष्ट्रिय दिवसमा भारत उपस्थित नहुने
आइपिएल रेकर्ड्स : अहिलेसम्म ५२ शतक, कसले कति बनाए ?
मेसीले कमब्याक गरेको खेलमा अर्जेन्टिनाको लज्जास्पद हार
रोनाल्डो बिना युभेन्टस पराजित, सिरी ए मा सिजनको पहिलो हार
नेपालले कुवेतलाई बराबरीमा रोक्यो, किरण चेम्जोङको उत्कृष्ट प्रदर्शन
मेसी घाइते, मोरक्कोविरुद्ध नखेल्ने
साफ महिला फुटबल : नेपालले जवाफी गोल फर्कायो, सावित्राले गरिन गोल
ब्राड हज र अजित अग्रकरले भने, ‘सन्दीप दिल्लीका एक्स-फ्याक्टर खेलाडी’
‘एम्बाप्पे मेसी र रोनाल्डोभन्दा मुल्यवान’
रियालिटी शो नेपाल लोक स्टारको बजार प्रवर्धन एड प्याडले गर्ने
आइपिएलको पुरा खेल तालिका सार्वजनिक